यसरी गरिँदैछ दार्चुलामा सिसा खानी उत्खनन् - Jhilko
यसरी गरिँदैछ दार्चुलामा सिसा खानी उत्खनन्
३ बैशाख,२०७६ 281 0
सुदूरपश्चिम प्रदेशकोे दार्चुलामा पहिलो पटक सिसा खानी उत्खनन् शुरु गरिएको छ । टोरेक्स माइन्स नेपाल प्रालिले महाकाली नगरपालिका–६ बरमुडे र शैल्यशिखर नगरपालिका–४ रानीशिखरमा सिसा खानी उत्खनन् शुरु गरेको हो ।
चार वर्षदेखि सिसाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको थियो । अहिले आएर सो प्रालिले उत्खनन् काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा बरमुडे क्षेत्रको सिसा खानी उत्खनन् शुरु गरिएको छ । रानीशिखरमा आगामी असोजदेखि सिसा खानी उत्खनन्को तयारी गरिएको लगानीकर्ता एवं साईड इन्चार्ज प्रेमसिह धामीले जानकारी दिए ।
सडक नपुगेको बरमुडे क्षेत्रमा कम्पनी स्वयंले सडकको ट्रयाक खुलाउँदै सिसा उत्खनन शुरु गरेको छ । अहिले खानीसम्म सडक पु¥याइ उत्खनन्को काम शुरु गरिएको धामीले बताए । नेपालमै पहिलो पटक दार्चुलामा सिसा खानी उत्खनन् शुरु गरिएपछि रोजगारीको सम्भावना बढेको छ । सिसा उत्खननका लागि खानी तथा भु–गर्भ विभागले सहयोग गरेको छ । “विभागको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन सकियो, परिक्षणको लागि लगिएको सिसा खानी सफल भएपछि अहिले नियमित उत्खनन् थालिएको छ”, लगानीकर्ता धामीले भने । दुई वर्षअघिबाटै नियमित उत्खनन् गर्नुपर्नेमा लगानीलगायत भौतिक पूर्वाधारको समस्याका कारण ढिला गरि काम शुरु गरिएको उनको भनाई छ ।
सुदूरपश्चिम र काठमाडौँका १० जनाको झण्डै रु १० करोड संयुक्त लगानीमा सिसा खानीको उत्खनन् शुरु गरिएको हो । खानीबाट इलेक्ट्रोनिक ब्याट्रीमा प्रयोग हुने लिड नामक कच्चा पदार्थ निकालिने छ । डेढ वर्ष अघि रानिशिखर र बरमुडेमा परीक्षणको रुपमा सिसा खानी उत्खनन् थालिएको थियो । सिसा उत्खनन् गर्दा राम्रै भेटिएपछि अहिले आएर सो कम्पनीले काम थालेको हो ।
नेपाल सरकारले दिएको अनुमतीअनुसार उत्खनन शुरु गरेपछि खानीबाट दैनिक १५ टन कच्चा पदार्थ निकालेर प्रशोधनका लागि भारत निर्यात गरिने छ । नेपालमा सिसाको प्रशोधन गर्न उपकरण नहूँदा भारत निकासी गर्नुपरेको प्रालिले जनाएको छ ।
अहिले खानीमा १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । खानी उत्खनन् बढ्दै गएपछि स्थानीयले थप रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको सञ्चालक सदस्य धामीले बताए । दुवै क्षेत्रमा सडक सञ्जाल नपुगेका कारण आफै सडक निर्माण गरेर सिसा खानीसम्म पुग्ने प्रयास थालिएको हो । रानीशिखरसम्म पनि केहि भागमा कम्पनीले आफै सडक खनेको थियो भने स्थानीयलाई रोजगारी दिएको थियो । गाउँमा भएका खानी उत्खनन् हुन थालेपछि स्थानीयमा रोजगारीको आशा पलाएको रानिशिखरका स्थानीय महादेव ठगुन्नाले बताए ।
सिसा खानी उत्खनन् हुँदा समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । “सिसा खानी उत्खनन् थालिएको छ, यसलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनागर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा अब सरकारको हो”, धामीले भने । स्थानीयमा सीपको विकाससंगै सरकारले समेत राजस्वको ठुलो हिस्सा खानीबाट पाउनेछ । तर लगानीकर्ताहरु भने खानी सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । जिल्लामा थुप्रै प्रकारका खानी भएपनि सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खनन् हुन नसक्दा ओझेलमा छन् । जानकारहरुका अनुसार जिल्लामा सिसासँगै तामा, फलाम, सुन तथा चमेलिया नदी किनार क्षेत्रमा युरेनियम खानी रहेको छ ।-rss
राजपा र फोरमले संविधान संशोधनको मुद्दा छोडिसक्यो : निधी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन सय नयाँ कुष्ठरोगी
१ फाल्गुन,२०७५0327
३ फाल्गुन,२०७५0439
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयरबजार, उछाल आउनुको कारण यस्तो !
५ बैशाख,२०७६0208
शेयर बढ्नुको मुख्य कारण भनेकै बाणिज्य बैंकहरुमा लगानीकर्ता झुम्मिनु नै हो । पछिल्लो...
कार्यकाल दोब्बर बनाउने दाउमा देउवा !
३ श्रावण,२०७६0814
गत साता डा.महतको निवासमा भएको इतर पक्षको भेलामा महामन्त्री कोइराला, नेता डा. शेखर...